Global Voices teny Malagasy » Nahoana no Tiako ny Norooz? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Marsa 2015 15:50 GMT 1	 · Mpanoratra Arseh Sevom Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Iràna, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina, Ny Tetezana - The Bridge
Tori Egherman manazava ny fomba amam-panao Norooz, sy ny antony itiavany izany. Sary avy amin'i Ehsan Khakbaz H. tao amin'ny Flickr (CC BY-ND-SA 2.0)
Nosoratan'i Tori Egherman , Mpandrindra Fandaharana ao amin'ny Arseh Sevom . Nivoaka voalohany tao amin'ny habaky ny Arseh Sevom ny dika voalohan'ity lahatsoratra ity.
Norooz (na Nowruz) dia fotoana mahafinaritra ao anatin'ny taona ao Iran. Manomboka ny faran'ny Talata hariva alohan'ny lohataonan'ny Miraalina ny fankalazana izay ahitana afomanga sy afo-fitsambikinana. Mitsambikina eo amin'ny afo ny olona no sady mihiaka hoe “Zardiye man az to, Sorkhieh to az man,”, izay midika hoe “Manipy ny aizina sy ny aretina ao anaty afo, mahazo fahasalamana sy fifaliana avy amin'ny afo”. Mifarana roa herinandro aty aoriana miaraka amin'ny fitsangatsangana ankalamanjana izany.
Manamarika ny fiandohan'ny taona vaovao ho an'ny olona ao Iran sy ny firenena hafa ao amin'ny faritra ny Norooz.
Misy ny hery sy fientanam-po mandritra ny fankalazana ao Iran, fanehoana ara-kolontsaina mampifandray ny olona avy amin'ny fivavahana sy ny foko rehetra. Tsy azo saintsainina ny tsy ankalazana ny roa herinandron'ny fety. Raha nipetraka tao Iran aho, tsapa toy ny karazana fampidirana (vahiny) ny fetin'ny Norooz. Ny tiako lazaina amin'izany dia navelany ho Iraniana aho nandritra ny tapa-bolana ao anatin'ny taona iray. Nanome toerana hankalazako tsy mitsipaka izay ao amin'ny tenako. Mampandroso (vahiny) sy tsimanavaka ny fomban-drazana fetindrazana Norooz. Tsy mitaky finoana na fireham-pinoana izy. Sady an-tokantrano ny fankalazana no ankalamanjana, ary malalaka tokoa ahafanan'ny rehetra mankafy.
Hankalazaina amin'ny fotoan'ny miraalina ny Norooz, matetika ny 21 Martsa. Rehefa miseho amin'ny fotoana iray manerana izao tontolo izao ny miraalina dia izay no fiovan-toana, milaza fiovan'ny taona izay. Na amin'ny 3 ora maraina ao Los Angeles na amin'ny 2 sasany folakandro ao Tehran dia manomboka ny taom-baovao.
Misy ireo fomba amam-panao maro hiatrehana ny fiovan-taona, toy ny fanadiovan'ny lohataona, manao fanonerana, mividy akanjo vaovao, manolotra fanomezana, mamangy namana sy havana. Mandravaka ny tranony amin'ny haft sin (s Fito) ny ankamaroan'ny fianakaviana. Feno karazan-javatra manomboka anarana amin'ny “s” ny latabatra. Maneho lohahevitra iombonana amin'ny taombaovao ireo zavatra ireo, anisan'izany ny fanavaozana, fahendrena, fahasalamana, ary fanambinana. Matetika ianao mahita voa fihinana, tsindrin-tsakafo, vola madinika, atody, ary zavatra hafa.
Raha te-hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba amam-panao Norooz ianao, hanome valinteny an-jatony ny fikarohana tsotra amin'ny aterineto. Manana tari-dalana PDF ho an'ny mpanabe ny Oniversite Harvard. Manome ambangovangony momba ny Sizdeh Bedar,  fitsangatsanganana izay famaranana ny roa herinandron'ny fety Norooz.amin'ny fomba ofisialy ity rohy ity
Koa hoan'izay rehetra mankalaza ny Norooz: tratry ny taombaovao. Ho an'ireo izay tsy mankalaza; mbola tsy tara raha hankalaza izany!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/03/24/68730/
 Manana tari-dalana PDF ho an'ny mpanabe : http://cmes.hmdc.harvard.edu/files/NowruzCurriculumText.pdf
 Sizdeh Bedar,: http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/03/outdoor-moments-of-sizdah-bedar.html